Hetsiky maimaimpoana ataon’ny CUA: eny Anosizato indray ny fanampiana ara-pahasalamana | NewsMada
Hetsiky maimaimpoana ataon’ny CUA: eny Anosizato indray ny fanampiana ara-pahasalamana
Nisokatra etsy amin’ny fokontany Anosizato Antsinanana, nanomboka ny talata teo ary hifarana anio, ny hetsika fanaon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra “Iarivo manakaiky vahoaka” na ny tosika sy ny fanampiana ara-pahasalamana maimaimpoana manakaiky vahoaka sy ny lafiny sosialy.
Niara-niasa amin’ny sefom-pokontany ny kaominina satria mbola mila hatsaraina ny fanentanana ny mponina amin’ny fisitrahana ny tolotra. Nisy tamin’izany ny hetsika fizahana maso, ny fitiliana diabeta, ny fijerena tosidrà, ny fandajana zaza, ny fizahana fahasalamana maimaimpoana ary ny fanomezana fanafody.
Hita teny an-toerana ihany koa ny fandraisan’ny centre Ilaiko na CAS (Centre d’accès aux services) an’ireo olona manana olana sy ny fandraisana ataon’ny polisy miaro ny zaza tsy ampy taona amin’ny torolalana fiarovana ny vahaoka amin’ny herisetra sy ny maro samihafa.
Indroa isam-bolana ny atao izao hetsika izao eny anivon’ny boriboritany enina. Nandritra ny telo andro nisian’ny hetsika, olona 650 no tonga teny an-toerana nisitraka ireo tolotra. Tafiditra indrindra ao anatin’ny veliranon’Iarivo izao fandaharanasa manakaiky vahoaka izao. Mitohy eny amin’ny boriborintany faharoa indray izao hetsika izao toy ny eny amin’ny fokontany Andohamandry Ambohipotsy.